Ọmụmụ asụsụ na ide ihe: art art and psycho-therapy - Afrikhepri Fondation
Tọsde, Eprel 22, 2021
Welcome PSYCHART ọgwụ
Cueva de las Manos na eserese aka ya 8oo na-amalite site na afọ 13000
Ọmụmụ asụsụ na ide: nka nka na akparamaagwa
Theide ihe, mmepeanya, omenaala anaghị ebute n'ụzọ ọrụ ebube. Dị ka ọdịdị nke homo sapiens, ọ bụ usoro dị ogologo. N'ihu ya homo erectus bịara ma bilie. Mgbe ahụ homo habilis mere onwe ya ngwa ọrụ wee bido lie onye ọ nwụrụ. Mana ọ bụ n'ezie homo sapiens na-abanye na asụsụ na nkwukọrịta site na nka. Pictogram (nnọchite nke ụmụ nwoke na anụmanụ), ideogram (akara, akara), psychogram bụ ezigbo ụzọ nke nkwukọrịta ma bụrụ mmalite edemede. Gini mere eji ekwu ya mgbe nile na ide ede ya mere akuko sitere na Mesopotemia? N'ihi na ọ bụ site na nke a ka ederede anyị si enweta? Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị ọzọ dịkwa mkpa ma dị irè (ihe odide, ihe odide China na ederede Mende na ndị ọzọ).
Kedu ihe kpatara ejikọ ederede a na mbido akụkọ a? Gịnị ka okwu nke akụkọ ihe mere eme pụtara? Na akwụkwọ ọkọwa okwu anyị na-ahụ: ihe ọmụma ma ọ bụ mmekọrita nke ihe ndị mere n'oge gara aga, eziokwu metụtara mmalite nke mmadụ.
Ihe ndị mere n’oge gara aga dị mma ma na-akọ n’ezie ihe osise na ihe osise ndị a na-eme n’elu oké nkume.
N'otu aka ahụ, gịnị ka anyị pụtara site na mmepeanya? Ọ bụ usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya (okpukpe, omume, ịchọ mma, sayensị, teknụzụ) nke obodo niile.
Na mbido enwere naanị otu mmepeanya, ọ bụ mmepeanya Africa, otu asụsụ. Mgbe ahụ, site na mpụga nke homo sapiens a ga - enwe ọdịiche, mgbanwe nke ga - eduga na nghọta nke ndị dị iche iche (oflọ Elu Bebel). Mmepeanya ga-adị iche. Mana oke mmepeanya mbụ bụ mmepeanya Ijipt nwere ụba nke ụkpụrụ ya nke ikpe ziri ezi, omume ya, nzukọ ya.
Mmepe anya nke ọdịda anyanwụ, nke zuru ụwa ọnụ ugbu a, bụ nke e ji mara mmepe mmepe nke teknụzụ. Agbanyeghị, nke a bụ naanị otu akụkụ nke mmepeanya.
Ọ bụ n'Africa ka etolitela nka, okpukperechi, omume, isi ihe banyere ọgwụ, mgbakọ na mwepụ, wdg.
Oge eruola maka ọgbọ ọhụrụ ndị Africa ịmara nke a ma ghara ịmaba na teknụzụ.
Ọ dị mkpa ka ị gaa n’ihu na-eme nka (egwu, eserese, ihe ọkpụkpụ, ịgba egwu), ịchọta ụkpụrụ omume na mmụọ ime mmụọ Africa, ịgbapụta ihe ọmụma banyere ọgwụ ọgwụ, ichebe ihe nketa ha.
Nke a bụ ya mere na ọ na-atọ ụtọ ịme omume psycho-ọgwụ. Oria psycho-therapy nwere ihe jikotara ya na nka iti egwu di ka ya, obu itughari asusu na ndi na ekwu okwu. Akụkụ nke ịchọ mma abụghị ihe ùgwù dị ka West ma na ntụgharị okwu nke mkpali. Nke a bụ ihe mere ndị Africa na-eto eto kwesịrị iji tụgharịa na ya (psycho-therapy) iji nwetaghachi ahụmịhe ha ma nwee ike ịmepụta ọzọ.
Dika ndi na-ese ihe ndi ozo nwere ike ibufe ugha ha na ndi ozo, psycho-therapy di nso na ntinye nke Africa. N'ezie, ọ na-enye ndị na-eme ya ohere ịchọ n'ime onwe ha maka ọdịdị na akara ngosi nke ha ga-ebipụta na usoro: ụdị nke onwe bụ njirimara nke ndị okike.
Site na Zirignon Grobli, onye na-agwọ ọrịa uche
Enyere gị uche gị - Wayne Dyer (Audio)
Egwuregwu Egwuregwu (Egwuregwu)
Nelson Mandela, onye dike anyi?
Otu esi akpọte ime mmụọ
Can nwere ike ịbụ onye isi ala n’Afrika n’agaghị bụrụ dibịa afa?